Finfinnee, Amajjii 4, 2010 Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi.
Ijaarsa daandichaaf bajata Birrii biliyoona 4.3 ol ramaduusaa Abbaan-taayitaa Daandiiwwanii Finfinnee beeksiseera.
Piroojaktoota waggaa kana ijaarsi isaanii jalqabame keessaa waliigalteen ijaarsa daandilee 8 mallatteeffamuusaa Daayirektarri Dhiimoota Koominikeeshinii abbaa-taayitichaa Obbo Xi’uumaay Waldagabiri’eel himaniiru.
Daandiin waliigalteen kun mallatteeffameef Birrii biliyoona 2 ol kan gaafatu yoo ta’u, dheerina kiiloo meetira 24 ol kan qabanidha.
Daandilee waliigalteen irratti mallatteeffame keessaa Haayilee Garmantii hanga Adabaabaayii Jamoo kan jiru Qeeraa Kabt Baratii hanga Goofaa Mabraat Haayilii, Boolee Ayaat Saayitii hanga kondominiyamii 4 keessatti argamu.
Daandilee adeemsa caal-baasii irra jiran keessaa ammoo daandileen Boolee Madaaniyaalam marsaa 22 Imbaasii Ingilizii, Ayyar Xeenaa Walattee, Hospitaala Raas Dastaa hanga Qacanee Madaaniyaalam, Kotabee Kidaanamihirat, Kotabee Nageenyaa keessatti argamu.
Piroojaktoonni daandii kunniin akka dheerina isaaniitti yeroon ijaarsaa waggaa 1 hanga 2 taa’eerafi. Zufaan Kaasaahuntu gabaase. (FBC)
More in this category: « Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe
TV OROMIYA NOV-14-2016 Views : 3854
Torbe Kana 13924
Ji'a Kana 25320
01/05/07 irraa eggalee 8124475
Kan Amma Daawwachaa Jiran 17